Samarekha.com.np :: भत्ताकै सहारा —एकल यात्राको ५३ बर्ष |
भत्ताकै सहारा —एकल यात्राको ५३ बर्ष
दशरथ घिमिरे || 44 Views || Published Date : 4th July 2019 |
देउखुरी दाङ । गाला चाउरिएका छन् । कपाल सेतै फुलेको छ । पातलिएको छ शरीर । तर रेडियोमा बृद्ध भत्ता एक हजार बढेको समाचार सुनेदेखि दुर्गादेवी उपाध्यायमा बेग्लै उमंग छाएको छ । भित्र भित्रै धेरै बाँच्ने आशा पलाएको छ । ‘बिहान समाचार भन्यो भत्ता बढेर तीन हजार पुग्यो रे’ खुसी हुदै दुर्गादेवीले भनिन्, ‘भत्ता बढाउछु भन्थे बढाएरै छाडे । आर्शिवाद छ ।’ दुर्गादेवीको बाँच्ने आधार त्यही भत्ता हो । सरकारलाई नै जेठो छोरा मान्छिन उनी ।
दुःख बिरामी पर्दा पानी खुवाउने मान्छेसम्म छैन । एकल जीवनको यात्रा ५३ बर्ष पुगेको छ । लमही नगरपालिका वडा नं. ६ देउपुर निवासी दुर्गादेवी उपाध्यायको एक्लो जीवनको साथी सरकार बनेको छ । उनको सात बर्षको उमेरमा बिवाह भएको थियो । उमेर २० बर्ष पुग्दा विधुवा हुनुप¥यो । जुम्ल्याहा छोरा र एक छोरी गरी तीन सन्तान भएका थिए । तर, ती सन्तान कोही बाँचेनन् ।
‘श्रीमान्को चिनामा सन्तान नहुने भन्ने थियो रे, कोही पनि सग्ला भएनन् ’दुर्गादेवीले भनिन् ‘श्रीमान् र सन्तानको सम्झना हरेक पटक आए पनि बिरामी परेर थलिँदा धेरै आउँछ । पानी दिने मान्छे हँुदैन । छिमेकीको सहाराले बसेको छु ।’
एउटा मान्छेलाई जीवन ज्यून के के चाहिन्छ ? सब थोक त्यही भत्ता वापत आउने रकमले पु¥याउनु परेको छ । ‘छोरा छोरी छैनन् । श्रीमान् छैनन् । कमाएर देलान भन्ने कुरै भएन’ उनले भनिन, ‘सरकाले भत्ता दिएर बचाएको छ ।’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आउने बर्ष कार्यान्वयन हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एक हजार बृद्धि गरेपछि एकल महिला, जेष्ठ नागरिकहरु खुसी भएका छन् ।
पाँच धुरको जग्गामा एउटा सानो कटेरो छ । घरसम्म पुग्ने निकास छैन । ‘पहिला जग्गा किन्दा यस्तै किनियो । निकास पनि छैन । छिमेकीले अलिकति बाटो छोडदिनुभएको छ । त्यही बाटो बाट आउने जाने गर्छु’ उनले भनिन्, भत्ताबाट दाल, चामल, नुन, तेल, विजुली, पानी, औषधी उपचार सब थोक त्यही बाट खर्च चलाउनु पर्छ ।’
खानेपानीको धारा समेत छैन् । छिमेकीबाट पानी ल्याएर खानुपर्ने वाध्यता छ । लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले विपन्न तथा एकल महिलालाई निःशुल्क पानीको धारा उपलब्ध गराउने बताए पनि त्यो सुविधा यहाँसम्म आईपुगेको छैन् ।